Semalt: I-WordPress Plugin Indleko - Iingcebiso eziwusizo
I-plugin ye-WordPress yangokwezifiso idizayini yayo ekhethekileyo, isebenzi ethile kunye nemimiselo ethile eya kufana ngqo nebhizinisi lakho. Kukho amakhulu ukuya kumawaka eeplagizi zamahhala kunye neepalamum, kodwa iplagin ye-WordPress yangokwezifiso ayikho enye indlela ongayilungisa ngayo kwaye ukhulise imisebenzi yayo ngokwemiqathango yakho neemfuno zakho. Nangona kunzima ukuwabo abathengi kwi-intanethi, unokwenza iiplagiza ze-WordPress ezimangalisayo kwaye wandise ukuthengisa kwakho.
URoss Barber, oyingcali ephezulu ye-10 (Semalt Iinkonzo zeDivarti, ugxininisa ukuba iinkampani kunye nabaphuhlisi baqonda ukuba abasebenzisi abafuni ukuhlawula kakhulu iiplagi ze-WordPress. Yingakho ezininzi zeeplagizi zizenzekelayo kwaye zikhululekile ngeendleko, oku kuthetha ukuba unako ukukhuphela ngokukhawuleza, ukufaka kunye nokubenza. Abaphuhlisi beewebhu ezahlukeneyo kunye neenjini zinikela ngezisombululo ezintle kwiingxaki zakho ezinxulumene neeplena, kwaye amaxabiso acacile - large womens winter hats. Ngokusekelwe kwiimfuno zezoshishino zakho, unokukhetha iiplagizi zamahhala okanye iinguqu ezihlawulwe.
Qonda amaxabiso eeplaski ze-WordPress
Iplagiji nganye ye-WordPress yesiko iyakhelwe kumthengi ngamnye, kwaye iindleko ziyahluka ngokusetyenzwa kwithuba elingakanani umlobi ezithathayo ukwakha. Iiplagiza ze-WordPress ziza kuluhlu olubanzi, kwaye amaxabiso abo ayahluka ukusuka kwinkampani ukuya kwinkampani..Ixabiso le-plugin ngumsebenzi wezinto ezimbini eziphambili: unonjiniyela ophuhlise iplagi ethile kunye nexesha athatha ngayo ukudala nokuvula iplagin yakhe ngaphandle kokunciphisa umgangatho. Ukuba untsha kwi-WordPress kwaye ungazi nto malunga neeplagi kunye namanani abo, kufuneka ugcine engqondweni ngala manqaku alandelayo:
1. Buza ngeenxa zonke uze ufumane ukuqikelelwa kwe-plugin yakho ye-WordPress:
Okokuqala, kufuneka ucele ukujikeleza ukufumana uqikelelo lwendlela iiplagizi zisebenza ngayo kwaye zinzima kangakanani. Ukufumanisa ukuba i-plugin yakho ye-WordPress iyinkimbinkimbi kangakanani, akukho ndawo ithatha indawo yeengcali ze-IT. Ukuba uyayazi yonke into malunga nonjiniyela kwaye unengcamango yokuba zininzi iiplagi sele sele ziqalisile, kuya kuba lula ukuba uqikelele indleko okanye intengo ye-plugin. Ngenxa yale njongo, unokujoyina iifom ye-WordPress ezisemthethweni, i-WordPress subreddits kunye namaqela e-WordPress kwi-intanethi. Buza imibuzo uze uqhagamshelane nabadala ukuba wazi ukuba uninzi kangakanani i-plugin kwaye ngubani owona mbhali ongcono kakhulu kule shishini.
2. Iirhafu zePlagin ye-WordPress yesiko
Kuyacaca ukuba amaxabiso eeplagiza ze-WordPress zesiqhelo ziyahluka kwaye ziya kuxhomekeka kwimiba emininzi yokuphononongwa kunye namazwana awamkeleyo. Ngokubanzi, iingcali ze-WordPress kunye nabaphuhlisi bayaqonda ukuba amaxabiso akakwazi ukufana neefowuni ezahlukeneyo zenzelwe ukwenza imisebenzi ehlukeneyo.
3. Ukufunda ngokubanzi
Kufuneka uzame ukuqonda ubunzima bePlagin ye-WordPress yangokwesiko ngaphambi kokulinganisela ixabiso layo. Ingxaki eyinkqutyana iplagin, iphakamileyo iya kuba ngamazinga ayo. Iiplagi ozibonayo kwi-akhawunti yakho ye-WordPress yenza inani elilinganiselweyo lemisebenzi kwaye unayo impawu ezininzi. Yaye ukuba unayo i-website yezobugcisa okanye ufuna ukukhulisa ishishini lakho ngelo xesha, akufanele uncike kwii-plugin ezikhululekile kwaye kunoko ukhethe iiplagiza ze-WordPress eziqhelekileyo eziza kubiza i-$ 10 ukuya kwi-900.